Icandelo leShishini-SHANGHAI KAIQUAN Pump (GROUP) Co., Ltd.
Ipaki yeShishini yaseShanghai
Ipaki yeShishini leHefei
Ipaki yeShishini yeShijiazhuang
Ipaki yeMizi-mveliso yaseShenyang
I-Shanghai Kaiquan Pump (Iqela) Co., Ltd. yenye yezona mpahla zinkulu zokuvelisa impompo, ngokukodwa ekuphandeni nasekuyileni, imveliso kunye nokuthengiswa kweempompo ezikumgangatho ophezulu, iinkqubo zokuhambisa amanzi kunye neenkqubo zolawulo lwempompo. Ikhokelela kushishino lokuvelisa impompo e China. Inani labasebenzi liphela lingaphezulu kwe-5000, ebandakanya ngaphezulu kwe-80% yabanini beediploma zekholeji, ngaphezulu kweenjineli ezingama-750, injineli ephezulu noogqirha. Iqela KAIQUAN ungumnini parks 5 Industrial e Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning kunye Anhui kunye indawo iyonke 7,000,000 square metres.
Ngokutsho ingeniso intengiso, Shanghai Kaiquan zibekwe No.1 iminyaka eli-15 zilandelelana kushishino pump China kwaye ngo-2019 umthamo intengiso iqela 850 yezigidi zeerandi. Ngoncedo lweenkqubo ze-ERP kunye neCRM, iKAIQUAN ibonelela ngezisombululo zobungcali kubo bonke abathengi abakwimakethi yaphesheya. Ngaphezu koko, KAIQUAN iseke uthungelwano inkonzo kazwelonke 32 iinkampani isebe intengiso kunye arhente 361. Ukuvelisa iimveliso ezikhuphisanayo nezithembakeleyo zokwanelisa abathengi yeyona nto iphambili kuKaiquan.
Iimveliso eziphambili: Yahlula impompo isampuli, nkqo Impompo yeempompo ezibalekayo ishishini lezityalo zenyukliya.
Idilesi: Hayi. 4255, Caoan Road, Jiading District, Shanghai, China
(I-Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co, Ltd. yayingoyena mvelisi ubalaseleyo kwiimoto ezingena emanzini kunye neempompo zombane zangaphantsi zombuso wase China).
Ngo-2008, iqela laseKaiquan lathenga iHefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. yatshintsha igama layo laba yiHefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Igubungela indawo iyonke engama-270,000 eemitha zesikwere kunye nendawo yokwakha engama-230,000 eemitha zesikwere kwimveliso . Okwangoku, inabasebenzi abangaphezu kwe-1500 kubandakanya iinjineli ezingama-278 kunye neenjineli ezingama-56 eziphezulu. Kukho uvavanyo oluphucukileyo, uhlolo kunye noyilo lwezixhobo zeemotor zangaphantsi kunye neempompo apha.
Iimveliso eziphambili: Imoto engena emanzini, impompo engena emanzini, impompo yokulwa nomlilo, Impompo ehambayo yeAxial, Impompo yokuntywila edibeneyo, Inkqubo yokuPakisha engena phantsi, Iphaneli yokulawula, Impompo yetyala, Impompo yenqanaba elinye njalo njalo.
Idilesi: Hayi 611, Tianshui Road, Hefei Xinzhan District, Hefei isixeko, Anhui kwiPhondo, China
Shijiazhuang Kaiquan oluludaka Pump Co., Ltd. yasekwa ngo-2005 kunye notyalo-mali iyonke ye-20 ezigidi zeerandi, egubungele indawo iyonke 47,000 square metres & indawo yokwakha malunga 22,000 square metres. Okwangoku, ineengcali ezingama-250, amagcisa aphezulu kwezobunjineli kunye nabasebenzi abanezakhono. Kukho umgca wemveliso yentlaka ehambele phambili kunye nabaxube besanti abaqhubekayo. Zonke izinto ezilahlwayo zamkela isanti yokubumba isanti kunye neetoni ezi-2 kunye neetoni ezi-1 eziphakathi ezithandwayo ezinokuphosa itoni enye. Ukongeza, ineeseti ezingaphezu kwe-300 zezixhobo eziphambili.
Iimveliso eziphambili: Zonke iintlobo zempompo oluludaka olusetyenziselwa iMinging, imveliso yamalahle, isityalo saMandla, ukuntywila eMlanjeni, iAlumina kunye nolunye ushishino.
Idilesi: Umzi mveliso weZHENGDING County, kwiPhondo le-Hebei, China
I-Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. yinkxaso-mali ye-KAIQUAN Group egubungela indawo iyonke engama-34,000 eemitha zesikwere kunye nendawo yokwakha yeemitha ezili-12,000. Ngabasebenzi abangama-630 ngoku abaquka iinjineli ezingama-63 eziphezulu. Kukho iiseti ezingama-200 zoomatshini abaphambili ezinje ngezixhobo zomatshini we-NC, izixhobo zomatshini ezikhulu, oomatshini bokulinganisa abakhawulezayo, uvavanyo olungenakonakalisa izixhobo ezizenzekelayo ze-welding.
U-Shengyang Kaiquan unezinto ezifanelekileyo zokuvelisa kunye novavanyo, abasebenzi abaphambili kwezolawulo, ulawulo olungqongqo kunye nentlangano esekwe kwiinkqubo kunye namaxwebhu e-IS09001 iinkqubo zamanye amazwe ziqinisekisa ukubonelela ngemveliso entle kubathengi behlabathi.
Iimveliso eziphambili: Inkqubo yokupompa ye-API610 ifezekisa iimfuno ze-API6107 ANSI B73.1M kunye ne-IS02858
Idilesi: Inombolo 4, 26th Road, Shenyang ET District, Shenyang isixeko, Liaoning kwiPhondo, China
IZhejiang Kaiquan Industrial Park yasekwa ngoSeptemba 1968 kwaye yathiywa igama njengeZhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. ngoMeyi 1994. Iquka indawo iyonke yeemitha zesikwere ezingama-50,000 kunye nendawo yokwakha engama-23,678 eemitha zesikwere eZhejiang. Ngoku inabasebenzi abangama-490 kunye neeseti ezingama-213 zokuqhubekeka nokuvavanya izixhobo ezinamandla emveliso yonyaka ngaphezulu kweeseti ezingama-100,000 ezinexabiso lemveliso yonyaka yezigidi ezingama-35 zeedola.
Iimveliso eziphambiliImpompo yenqanaba elinye, Impompo esemgceni, Impompo yokufunxa
Idilesi: Indawo yoShishino eMpuma Yurophu, kwiYongjia County, kwisiXeko saseWenzhou, kwiPhondo laseZhejiang, China